I-Plantar Fasciitis - Izixazululo Zokuqeda Le Nkinga | Bezzia
La i-plantar fasciitis Kubonakala lapho indawo ye-fascia, noma izicubu ezingezansi zonyawo, zivutha. Isuka esithendeni iye kulokho okubizwa ngokuthi yibhola lonyawo, ngakho-ke singasho ukuthi yakha indawo noma ibhande elihlanganisa unyawo ukuze likwazi ukulolonga nokugcina ukungezwani kwalo. Okuthile kwesinye isikhathi kube buthakathaka futhi kunikeze izinkinga ezithile.
Kungakho ukuphendukela kudokotela kungezinye zezinyathelo okufanele sizithathe, kepha hhayi ngaphandle kokuqala wazi amakhambi ukuze sikwazi phungula i-plantar fasciitis ngendlela yasekhaya. Uzozibona izinguquko ngesikhathi esifushane futhi zishibhile impela futhi zilula. Akufanele ubaphuthele!
1 Ziyini izimbangela ze-plantar fasciitis
2 I-Apple cider uviniga namanzi ashisayo
3 Amakhambi asekhaya: Isicelo seqhwa
4 Khetha ezinye izicathulo ezinhle
6 Ukushisa isicelo
Ziyini izimbangela ze-plantar fasciitis
Kungahle kube nezimbangela eziningi ezisiholela ekutheni sikhulume nge-plantar fasciitis. Ngokwesibonelo, umsebenzi ophindaphindiwe njengokushaya le ndawo kungaba ngokugijima noma ngokudansa, ikakhulukazi uma sikwenza ezindaweni ezinzima futhi ngaphandle kwezicathulo ezifanele. Vele, ngakolunye uhlangothi, ukuba sezinyaweni zakho isikhathi eside nakho kuzodala ukuthi le ndawo ivuvuke, kube sengathi asizisebenzisi izicathulo ezifanele. Uma singeza kulezi zimbangela ukukhuluphala ngokweqile noma izinyawo eziyizicaba, lapho-ke inkinga izovela kakhulu. Ubuhlungu buzoba imbangela yokunquma kokuthile okwenzekayo kuleyo ndawo. Yize kwesinye isikhathi kunganweba kancane kubheke emaqakaleni.
I-Apple cider uviniga namanzi ashisayo
Futhi ngokumelene nokuvuvukala, i-apula cider uviniga ingenye yezindlela ezingcono kakhulu. Kepha yebo, ayizi kuphela ngoba kufanele sihlanganise ingilazi kaviniga ebhakedeni elikhulu elinamanzi afudumele. Kule ngxube kufanele sethule izinyawo bese sizilinda zipholile ngokuphelele, cishe imizuzu eyi-15 noma ngaphezulu. Uzobona nokukhululeka okuhle.
Amakhambi asekhaya: Isicelo seqhwa
Kuyiqiniso ukuthi lapho lobu buhlungu buqala, kungcono uye kudokotela. Njengoba angasenzela ukuxilongwa okunembe kakhudlwana ngakho-ke athole inkinga ngaphambi kodwa nangesixazululo. Kodwa futhi sinamakhambi asekhaya asisiza kakhulu. Kulokhu kuzoba ukusetshenziswa kweqhwa. Kepha khumbula ukuthi awusoze wakwenza ngqo esikhunjeni, kepha ungabeka isikhwama noma indwangu phakathi. Ungayifaka cishe imizuzu eyi-10 nezikhathi ezimbalwa ngosuku. Vele, amakhaza yilowo ovalelisa ukuvuvukala futhi ngenxa yalokho, nobuhlungu.
Khetha ezinye izicathulo ezinhle
Kubalulekile empilweni yethu, ngoba ukukhetha izicathulo ezinhle kuzovumela izinyawo zethu ukuba ziphumule ngokwengeziwe futhi kangcono. Ngakho-ke, Kunconywa izicathulo eziphansi ezinokudonsa okuhle. Uma ungawatholi, ama-insoles azokusiza ngoba azosimamisa igxathu ngalinye ngokwengeziwe. Uma sinezicathulo zezemidlalo noma cha futhi sizizwa sikhululekile ngazo kodwa zigqokiwe ngandlela thile, kungcono ukungazisebenzisi. Ngoba ekugcineni sizobe senza inkinga ikhule kunenye indlela ezungezile.
Noma nini lapho sinezinhlungu, ukusikhipha kahle kungaba yisixazululo sokulwa nale nkinga. Kulokho bazoshiya ngemuva kwazo zonke izinhlobo zokungezwani futhi-ke, nobuhlungu. Kuzoba yiminwe ezosisiza ukuthi sicindezele kancane kuyo yonke indawo. Ungahambisana namaconsi ambalwa kawoyela abalulekile.
Ngaphambi kokuthi sisho amakhaza, kepha kuliqiniso ukuthi akuhambi kahle kubo bonke abantu. Kwezinye izimo, ukushisa kunesibopho sokuphumuza imisipha ngakho-ke, kufanele futhi sikucabangele. Ungagcwalisa ibhodlela lamanzi ashisayo esivele lihloselwe le njongo. Lapho kungashisi kakhulu Uzoyifaka endaweni ethintekile, ulinde ukuthi ipholile, okuzoba lapho ungayisusa. Ngalesi senzo esilula uzoqeda ukungezwani endaweni futhi kuzoba ukukhululeka okukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Izifo » Amakhambi okudambisa i-plantar fasciitis